Ikhabethe lezingodo eliwubukhazikhazi lokuziphekela e-Assich Zen Lodge - I-Airbnb
Ikhabethe lezingodo eliwubukhazikhazi lokuziphekela e-Assich Zen Lodge
Cawdor, Scotland, i-United Kingdom
Iqhugwane ibungazwe ngu-Stephen
Idizayinelwe njengendawo yokudlala phakathi kwendlu yetiye ye-Zen kanye ne-Highland hunting lodge, i-Assich Zen Lodge iyikhabethe likanokusho lezingodo elinengadi ye-Zen, elakhiwe ngaphakathi kwenkundla - futhi isebenzisa amatshe amaningi - e-byre yakudala eyonakele. Inikeza indawo yokuhlala eyingqayizivele ngempela, yothando futhi kanokusho endaweni enhle nenokuthula, lapho izivakashi zingajabulela ukubukwa okumangalisayo kwentaba, ulwandle, ihlathi nesigodlo, kanye nokusetshenziswa okukhethekile kwendawo enkulu enomqhele, umhubhe oshiswa ngezinkuni, i-sauna kanye nomgodi womlilo. .
Indawo yokuhlala inepulani elikhulu elivulekile - elihlanganisa: Igumbi lokuphumula elinesitofu esibaswayo, indawo yokulala enombhede kanokusho wenkosi enkulu, indawo yokudlela nekhishi (ngayinye inezicabha zayo ezimbili eziphindwe kabili) - nendlu yangasese ehlukile neshawa. igumbi. Ngale kweminyango ephindwe kabili kunendawo enkulu ehlotshisiwe ekwazi ukungena ku-sauna, umgodi womlilo, ubhavu oshisayo, isitolo samalogi kanye nezihlalo zangaphandle. Sicela uqaphele: ngenxa yesimo nendawo yendawo, equkethe izingozi eziningi zohambo, i-Assich Zen Lodge ngokudabukisayo ayizilungele izingane noma abagulayo. Indawo yokuhlala eseduze yabantu abadala ababili nayo iyatholakala - bona uhlu oluhlukene lwe-Assich Croft. (Amanani esaphulelo ayatholakala ukuze aqashe kokubili). Sicela uqaphele: kudingeka okungenani isaziso sosuku ukuze kulungiswe ubhavu oshisayo. Sicela uqaphele futhi ukuthi i-sauna kanye nobhavu oshisayo kokubili kubaswa ngezinkuni, futhi izitofu zabo zidinga ukuphakelwa ngezikhathi ezithile ngamalogi (kusuka esitolo samalogi). Ngizokunikeza imiyalelo ephelele mayelana nokusebenza kwesitofu, noma ngokuvamile ngingakwenzela uma kudingeka. Kuye ngezinga lokushisa elizungezile, ubhavu oshisayo uthatha phakathi kwamahora angu-3-5 ukuze ufinyelele izinga lokushisa elihle (ngingakwazi ukulilungiselela ukufika kwakho), kanye ne-sauna kusuka emaminithini angu-45 kuya ehora. Izinkuni zifakiwe enanini lokubhukha.
5.0 · 222 okushiwo abanye
Ihlezi phezu kwe-esker (igquma elide eliwugwadule elakhiwe isenzo se-glacial meltwater on gravel), u-Assich Croft ujabulela ukubukwa okumangalisayo kwe-panoramic phezu kwe-Moray Firth, i-Black Isle, i-Easter Ross kanye nezintaba ze-North West Highlands. Ngosuku olucwathile (okungeyona into engavamile endaweni enemvula ephansi kakhulu eScotland), ngebhangqa elihle lama-binoculars, ungabona kuze kufike e-Orkneys. Ngokusobala i-North West Highlands iyipharadesi labahambi elibhalwe kahle (u-Ben Wyvis ubonakala ngokugqamile ekubukeni okuvela engadini), kodwa kuningi ukuhamba okujabulisayo okungaba khona usuka emnyango, engingakujabulela ukweluleka ngakho izivakashi. Siphinde sabusiswa ngobuningi bamabhishi amahle (futhi avame ukushiywa dengwane) endaweni, futhi kunokudoba okusezingeni lomhlaba negalofu okufanele kube khona endaweni. Imvelo inala futhi iyahlukahluka (izingwejeje ezibomvu, izinyamazane, onogwaja, oklebe kanye noklebe bonke abavakashela engadini), noma ungase ukhethe ukwenza ubungane nelinye lamahhashi amahle aseClydesdale ensimini eseduze. Ummeleli oyedwa odume kabi wezilwane zasendle zase-Scottish ongeke neze umbone lapha inselele esabekayo! Njengoba singenakho nhlobo i-middge, siyakwazi futhi ukujabulela kahle ubusuku obude behlobo ngokushona kwelanga okumangazayo, futhi uma unenhlanhla ngempela ungathola ukubona izibani zaseNyakatho.
I-Assich Zen Lodge isendaweni yase-Assich Croft, lapho ngihlala khona. Ngokuvamile ngitholakala ukuze ngiphendule imibuzo, noma ukunikeza iseluleko ngokuhlola indawo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Cawdor namaphethelo